नयाँ शक्ति नेपालको ५ स दस्ताबेज | मेरो चौतारी
« नेपाली काङ्ग्रेस १३औ महाधिवेशन परिणाम
Published October 13, 2016	Uncategorized LeaveaComment
नयाँ शक्तिको मुख्य लक्ष्य र औचित्य हाम्रै जीवनकालमा नेपाललाई समृद्ध र सुखी मुलुकमा रुपान्तरण गर्नु हो । हामी चाहन्छौं– दश वर्षभित्र देशबाट निरपेक्ष गरीबी र बेरोजगराीको अन्त्य होस्; बीस वर्षभित्र देश मध्यमस्तरको विकासको स्तरमा पुगोस्; चालिस वर्षमा नेपाल समृद्धिको शिखरमा पुगोस् । हामी रोजगारी र सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक वृद्धिको नीति अनुसरण गर्नेछौं । त्यसनिम्ति विज्ञहरु र निजी क्षेत्र सहितको संलग्नतामा आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना तयार गरेर युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढंगले पुर्‍याउने; निजी क्षेत्र र राज्यको समुचित सहकार्य हुने; कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित योगदान हुने; स्वदेशी र विदेशी लगानी तथा श्रम र प्रविधिको उचित संयोजन हुने; विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम हुने गरी मौलिक र व्यवहारिक विकास नीति अनुसरण गरिनेछ । भौतिक समृद्धि सँगसँगै मानसिक सुख–शान्ति प्राप्तिमा यथोचित ध्यान दिइनेछ । हामी फोस्रा नारा र भाषणमा हैन व्यवहारमा समृद्ध र समतामूलक नेपाल बनाउँनेछौं ! सुदूर भविष्यमा हैन हाम्रै जीवनकालमा बनाउनेछौं !
0 Responses to “नयाँ शक्ति नेपालको ५ स दस्ताबेज ”